Ny Office 2016 dia miaina olana amin'ny OS X El Capitan | Avy amin'ny mac aho
Miguel Angel Juncos | | Apple, About us, Fampiharana hafa ho an'ny Mac, maro
Herinandro lasa izay dia navoaka ho an'ny besinimaro ny OS X El Capitan ary ankoatry ny fanatsarana izay nentiny niaraka taminy tamin'izany fotoana izany dia nanana "run-ins" sasany miaraka amin'ny rindrambaiko izay niasa tsara teo aloha tao amin'ny OS X Yosemite, ohatra iray anananay ao amin'ny Office 2016, Microsoft's office suite.
Mpampiasa an'ity Office 2016 ho an'ny Mac Izy ireo dia niaina hadisoana matotra rehefa mampiasa ny rindrambaiko, samy mizaka ny fihenan'ny Word, Excel, Outlook ary ny PowerPoint, na ireo mpampiasa Office 2011 aza dia manana olana hafa amin'ny Outlook ao amin'ny OS X El Capitan. Nahazo fitarainana avy amin'ireo mpampiasa ireo ny famoahana samihafa ankoatry ny kofehy misokatra ao amin'ny tranokala mpanohana Microsoft miresaka ny olana samihafa.
Fantatr'i Microsoft ireo olana ireo amin'ny rindrambaiko sy namaly ny fitarainana samihafa an'ny mpampiasa. Ao amin'ny kofehy misokatra ao amin'ny tranonkala fanohanana, ny Programme Microsoft Program, Faisal Jeelani, dia nanambara fa miasa mafy miaraka amin'i Apple ny orinasa hamahana ireo olana ireo, saingy nilaza fa mbola tsy misy fe-potoana voafaritra hanome vahaolana.
Fantatray fa mety misy mpampiasa sasany miaina olana amin'ny Office 2016 ho an'ny Mac rehefa mihazakazaka amin'ny El Capitan. Manadihady am-pahavitrihana ity raharaha ity amin'i Apple izahay. Mandra-pahatongan'ny vahaolana, omena torohevitra ny olona hametraka ny fanavaozana ny Office 2016 farany ho an'ny Mac amin'ny alàlan'ny Microsoft AutoUpdate.
Ny olana dia miainga amin'ny fianjerana tampoka, raha toa kosa ny mpampiasa hafa tsy afaka manokatra programa akory izy ireo Birao. Etsy ankilany ary indrindra ny Outlook, ny rindranasa misy olana indrindra, eny fa na ireo mpampiasa Office 2011 aza amin'ny tranga sasany dia tsy mahazo miditra amin'ny boaty.
Amin'izao fotoana izao ny vahaolana tokana dia ny fametrahana kinova taloha, izany hoe, Office 2011 (tsy mampiasa Outlook ho mpitantana mail) ary miandry ny famoahan'i Microsoft patch iray azo antoka izay manamboatra an'io toe-javatra io mba hanavaozana indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Microsoft dia miasa amin'ny fiezahana manamboatra bug ny Office 2016 amin'ny Mac
Jose Agudo dia hoy izy:
Loza, mihantona, elaela vao manokatra rindranasa ... noho ny Outlook 2016 hitako ny Airmail ary satria tsy misy safidy azo ekena hivoarana sy teny hoe raha tsy ...
Valiny tamin'i Jose Agudo
RaúlG dia hoy izy:
- Ny fampiharana teratany, Mail, dia tsy mampiseho hafatra avy amin'ny fifandraisana VIP.
- Misokatra ho azy ny sary rehefa mampifandray iPhone na dia tsy manana sary aza alaina.
- Ny Power on dia miadana kokoa noho ny kinova Yosemite farany.
- Tsy mandeha ny Cleanmymac 3 ary tsy maintsy sintonina sy apetraka indray.
- Toa miasa ny hafa, nefa tsy dia mahazo tombony firy.
Valiny amin'i RaúlG
- Izaho koa manana olana mianjera amin'ny «Split Screen» vaovao raha ny fahitana ny rindranasa Office.
- Olana toy ny Autodesk Autocad, mihantona.
Ismael Palacios Baeza dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa hantsaka ny Mac-ko ary hivadika PC, araka ny soso-kevitra naroson'ny namana sy olom-pantatro maro. Ny MacBook novidiko ho fitaovana miasa ary nanana ny eritreritra ratsy hametraka ny Kapiteny aho izay niteraka olana toy izany tamin'ny Word ka sahirana mafy tamin'ny asa nataoko aho. Heveriko fa tsy tompon'andraikitra amin'ny Apple ny fandefasana rafi-pandaminana izay miteraka olana amin'ny Office, izay tsy isalasalana fa ilay suite ampiasaina indrindra eto an-tany. Inona no lazain'i Apple? hijanona ho toy ny Volkswagen ve izy io?
Valiny tamin'i Ismael Palacios Baeza
Apple dia tokony hamoaka rafitra hiverenana, manomboka amin'ny El Capitan, mankany amin'ny kinova OSX 10 teo aloha izay tena tsara. Heveriko fa izany no fomba tokana hanonerana ireo tsy mailo nanompo tamin'ny kisoa Guinea »
Leo Echevarria dia hoy izy:
Manana olana lehibe aho hatramin'ny nametrahako ny kapiteny, tsy afaka mampiasa Word aho ary mivaingana foana, inona no hatao hamahana azy? Vonjeo!
Valiny tamin'i Leo Echevarria
Rehefa mamaha ity olana manaraka ity aho dia misintoma ny Office 2016 ary rehefa manandrana mametraka azy aho dia mahazo hafatra milaza amiko fa tsy mifanaraka amin'ny OS X ny birao, milaza amiko izany fa tokony misintona Window aho, misy fomba azo anaovana azy amin'ny fampiasana ilay Rafitra fiasan'ny Mac?
Mampiasa poin poin ho an'ny kaonferansa aho, manana Mac aho, miaraka amin'ny oofice 2016 dia nianjera mahafaty izy, nanavao ny El Capitan ary inona no azoko atao mitovy na ratsy kokoa?
Loza izany, ny Excel 2016 dia tsy mamaky rakitra sasantsasany, ary raha mamaky azy ireo dia diso izany. Nifandray tamin'ny fanampiana ara-teknika an-tserasera aho, nanazava aho fa azoko atao ny manokatra an'io rakitra io sy ny hafa miaraka amina kinova hafa hatramin'ny talohan'ny 2016. Rehefa avy nanao ahy hiasa amin'ny fomba hafa hafa aho dia nilaza tamiko izy fa ny rakitra dia ny olana. Nolazaiko azy fa io rakitra io dia ampiasain'ny olona maro fa tsy misy manana olana. Nanitrikitrika izy fa handinika ireo rakitrao aho, manana rakitra 50.000 2016 hodinihina aho. Tamin'izany valiny izany dia nankany amin'ny magazay maconline ao amin'ny Alto de las Condes de Santiago de Chile aho, rehefa nandany fotoana tamin'ny fomba hafa, nilaza tamiko izy raha misokatra miaraka amin'ny Nomery, olana lehibe io ary nilaza tamiko ilay rakitra misokatra fa ny Ny olana dia excel fa tsy afaka nanao n'inona n'inona izy ireo. Miresaka amin'ny mpitantana fivarotana, hoy izy: "Avy amin'ny mac ve ilay rakitra nalefan'izy ireo? Novaliako fa tsy nilaza tamiko izy »misy ny olana, raha tsy avy amin'ny mac ka hatramin'ny mac dia tsy mandeha izy? Noheveriko fa diso isika noho izany valiny izany. Ny olana ho azy dia manana Mac roa izy, ny iray manana excel 2011 ary ny iray manana excel 2011 ary nasehoko azy fa tamin'ny 2016 dia nanokatra izy ary tamin'ny 2500 dia tsy nanana. IZY NO NITENY AZY, TSY AZONTSIKA ATAONAO NA ATAONGA VOLA NY VOLA NA INDRAY INDRINDRA. Mandehana any amin'ny birao. ary eto aho miaraka amin'ny solosaina novidiana vao haingana tamin'ny sandan'ny $ XNUMX US ary tsy afaka miasa amin'izany aho.
Tena diso fanantenana aho amin'ny MAC sy amin'ny OFISA ary ankoatran'ireto farany dia tsy manana safidy fampiasana hafa aho.
ny akorandriaka dia hoy izy:
Manana boky Mac pro retina 13 ″ aho. Diso fanantenana tanteraka, niaraka tamin'ny Mac toy ny tamin'ny Office 2016. Tsara kokoa tamin'ny PC aho niaraka tamin'ny sanda 25% an'ity fitaovana vaovao ity. Samy manome tsiny ny mpamatsy roa, tsy misy mamaly. Mikatso ny solosaina, adala i Excel, manokatra adiresy marary ny manokatra mailaka, rehefa tsy mitahiry ny anarana ilay firaketana dia tsy hita, sns, sns, sns.
Tahaka ity birao 2016 ity, mahamenatra ho an'i Apple ary tokony hanao zavatra i Microsoft na hamerina ny vola naloany hampiasana azy, tsy afaka miasa ao amin'ny officeeeeee aho ary ny OS an'ny Macbook Pro manavao ny CAPTAIN ary maharikoriko izany.
REINALDO VE NO NAMONJY NY OLANA?
Valiny amin'i PATRICIO
Ny marina dia mbola diso fanantenana ihany aho, satria ny fampiasam-bola dia ny fananana zavatra "tsara" ary mamela ny zavatra irina ny marina, manana macbook air aho mandritra ny telo volana miaraka amin'ny Office 2016 napetraka, ary ny marina, ny rindrambaiko dia miadana, Indraindray miraikitra, ilay Macbook "miraikitra" ihany, ary ny marina dia tsy tianao hampiasa azy akory.
Pedro Antonio Manrique placeholder image dia hoy izy:
Nametraka OSX CAPITAN aho ary tsy miasa intsony ny Office POWER POINT sy WORD. Ampianaro aho azafady, manana adidy asa aho. Afaka miverina amin'ny OSX YOSEMITE ve aho?
Valiny tamin'i Pedro Antonio Manrique
Flowerade dia hoy izy:
TSY AZO IHANY! Navoaka tamin'ny 6 Oktobra 2015 ny naoty, ny volana Aogositra 2016 ary mitohy ny olana ... ny excel dia mahalasa saina ahy !!! tany am-piandohana dia vetivety ihany ny olana, taorian'ny fanavaozana fa nanaiky adaladala aho fa tsy afaka miasa tsara intsony, mandany fotoana be dia be aho amin'ny famerenana imbetsaka ny rindrambaiko. Amin'ny vidin'ny fahazoan-dàlana amin'ny birao, azoko natao ny nividy PC mitam-piadiana amin'ny biraon'ny piraty ary hiasa am-pitoniana araka izay azo atao aho ...
Valiny tamin'i Flowerade
jaiver moreno dia hoy izy:
Fiasco tena izy, birao misy mac os capitan.
Mamaly an'i jaiver moreno
Fernando Palma placeholder sary dia hoy izy:
salama maraina, mila fanampiana aho.
Tena ratsy ny fiasan'ny teny ary tsy afaka nitahiry antontan-taratasy na tamin'ny maha-izy azy aho na tamin'ny anaran'ny fisie hafa.
Ankasitrahako ny fanampianao.
Valiny tamin'i Fernando Palma
Loza tokoa ity pod ity fa mety ho paoma tsy tompon'andraikitra ary avelany izy ireo hivarotra anay tsy misy piratable irery ary indraindray tsy mandeha izy io satria manimba ny fisie ataonay toa ratsy amin'ny Mac-nao lehibe izay tsy mandeha ary manidy rakitra azafady mba ampio aho Izaho dia efa nividy ny fanavaozana ny maha-mpikambana ary milaza ity pod ity fa tsy mifanaraka amin'ny teny amin'ny mac fa ny excel ihany raha misokatra dia manampy aho
Mamaly an'i peter
Tsy vitan'ny hoe ratsy kokoa noho izany ny teny, fa manokatra rakitra tsy feno. Mazava ho azy fa tsy misy mamaly. Mifamadika amin'ny birao 2011.
Ismael Sánchez Hernández dia hoy izy:
Amin'ny teny Word, tsy azoko ilay horonan-tsary mifamadika rehefa mifantina lahatsoratra hovaina aho. Izay azoko atao. Manana retina 27 ′ iMac aho.
Valiny tamin'i Ismael Sánchez Hernández
Vao nividy macbook efa niasa aho, nanomboka ny taona 2012, ary manana olana mitovy amin'ny birao aho, nieritreritra aho fa rehefa mifindra amin'ny mac aho dia hijanona tsy hanana ireo karazana olana ireo, raha toa ka misy ny vahaolana dia mba ampahafantaro ahy amin'ity fomba ity.
Valiny amin'ny arismendy
JF Bradfer dia hoy izy:
Manana MacOS Sierra miaraka amin'ny Office 2011 aho. Niasa tsara eran'izao tontolo izao mandra-panapahako hevitra ny hanavao ny OS araka ny tolo-kevitry ny AppStore. Ary nanomboka teo ny olana miaraka amin'ny Office. Mangataka ahy hatrany i Outlook mba hampidina endritsoratra sinoa miisa 3 izay tsy ampiasaiko, tsy mampandeha ny mpanisa ny tsipelina i Word, indraindray i Excell dia tsy mandika ny raikipohy avy amin'ny sela iray mankany amin'ny iray hafa, mamindra ny sanda teo aloha ihany. Mazava fa tsy misy fifanarahana 100% eo amin'ny Mac OS sy Microsoft Office. Tsy sahy manavao ilay rindrambaiko intsony aho. Manontany tena aho raha tsy hisy ady varotra mangina eo amin'ireo orinasa roa ireo. Microsoft dia tsy maintsy mamorona vokatra mifanentana amin'ny Mac, mba tsy hamorona ampihimamba amin'ny PC. Mety ho voampanga i Microsoft raha tsy nanao izany. Saingy amin'ireo lesoka ireo, ahoana ny fomba hanehoana ny fahavononanao hamorona rindrambaiko tsy dia mandroso sy tsy mifanaraka mifanaraka amin'ny laoniny mba hiteraka fahavoazana ara-barotra amin'ny Mac? Sarotra kokoa ny manaporofo ny fikasana ...
Valiny tamin'i JF Bradfer
Gerardo Garcia dia hoy izy:
Tsy azo atao izany fa efa tamin'ny oktobra 2017 isika ary mbola mitohy ny olana! Hiandry ny birao 2018 ve aho? Ny zavatra tsara dia misy Windows ary Linux!
Valiny tamin'i Gerardo García
Olona mamaly vahaolana, manana olana amin'ny OS Sierra aho amin'ny birao 2011, tsy mandeha ny masinina ary ilay lavarangana kely manelingelina ahy, raha fintinina, izay no olana.
Recontra manelingelina, excel tsy misokatra amin'ny Mac-ko, hita fa nisy lesoka tsy nampoizina, tontolo andro nandaniako vahaolana ary tsy misy. Vonjeo!!!!
Ny Universal Search ho an'ny Apple TV vaovao dia mahazo lanja